Shrink ruzivo rwemufirimu - Yakakura Sirivha Pack (ShenZhen) Co., Ltd.
1.Nekujeka pachena uye kubwinya kwakanaka, inogona kuratidza zvakajeka kuoneka kwechigadzirwa, kugadzirisa ruzivo rwekunzwa, uye kuratidza yepamusoro-giredhi.
5. Zvakatipoteredza zvine hushamwari, zvisina chepfu, zvinoenderana neUS FDA uye USDA zviyero, uye zvinogona kurongedza chikafu.
Main Raw Zvishandiso
Huru mbishi zvigadzirwa zveshanu-rukoko co-extruded kupisa shrinkable kuputira firimu inosanganisira LLDPE (mutsara yakaderera density polyethylene), TPP (ternary copolymer polypropylene), PPC (binary copolymer polypropylene) uye anodikanwa anoshanda anowedzera seasipo mumiriri, Anti-ichivharira mumiririri, antistatic mumiriri, nezvimwewo. Izvi zvigadzirwa zvakasvibirira zvine hushamwari uye zvisina-chepfu zvinhu, hapana gasi rine chepfu kana hwema huchagadzirwa panguva yekugadzirisa uye chigadzirwa chishandiso, uye hutsanana hwechigadzirwa hunosangana neUS FDA uye USDA zviyero, uye zvinogona kushandiswa kurongedza chikafu.
Iyo shanu-rukoko co-extrusion kupisa inodzora kavha firimu inogadzirwa nemitsetse yakaderera-density polyethylene (LLDPE) uye copolymer polypropylene (TPP, PPC) semidziyo mikuru mbishi, ichiwedzera zvinowedzerwa zvakafanira, uye inogadziriswa ne co-extrusion furidza kuumbwa. Maitiro acho Akasiyana neyakajairwa ekuumba maitiro, nekuda kwehurombo hwakasimba hwenzvimbo yePP yakanyungudika mamiriro, echinyakare kurova kuumbwa maitiro haigone kushandiswa. Panzvimbo iyoyo, iyo nzira mbiri ye bubble inoshandiswa, iyo inonziwo maitiro ePulandi munyika. Chigadzirwa chinonyungudika uye chakabuditswa kunze kwemuchina, kuburikidza neyakagadzirirwa co-extrusion kufa, iyo yekutanga firimu inogadzirwa uye nekudzimwa, uyezve inopisa nekuda kwechipiri inflation uye kutambanudza kugadzira chigadzirwa.
Iyo shanu-masheji co-extruded kupisa inodzikira firimu inogona kugadzirwa mune akasiyana maratidziro maererano nechishandiso. Iyo yakazara ukobvu inotangira kubva pa12μm kusvika pa30μm. Iwo akajairwa makobvu ari 12μm, 15μm, 19μm, 25μm, nezvimwewo Iwo marongero ehupamhi anoenderana nevhoriyamu repakeji.
chando nemishonga: Iyo shanu-masheji co-extruded kupisa-shrinkable kuputira firimu inoramba yakapfava pa -50 ° C isina brittleness, uye inokodzera kuchengetwa uye kutakurwa kwezvinhu zvakapakurwa zvinhu munzvimbo inotonhora.
Hutsanana kuita: Iyo mbishi midziyo inoshandiswa mune shanu-rukoko co-extruded kupisa-kunodzora kuputira firimu zvese zvakatipoteredza zvine hushamwari zvisina-chepfu zvinhu, uye iyo yekugadzirisa uye yekushandisa maitiro ndeyehutsanana uye isiri-chepfu, zvinoenderana nenyika yenyika FDA uye USDA zviyero, uye inogona kushandiswa kupaka chikafu.
POF kupisa inodziya yekuvhara firimu ine akasiyana mashandisiro, musika wakakura, uye ine zvakanakira kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye isiri-chepfu. Naizvozvo, yakave ichikosheswa zvakanyanya nenyika dzakabudirira mupasi rose. Iyo yakatsiva yakatarisana nePVP kupisa kunodzora kuputira firimu seyakajairika chigadzirwa chekupisa chinopisa zvinhu zvekutakura. Kugadzirwa kweiyi nhepfenyuro yezvigadzirwa munyika yangu kwakatanga pakati-ma1990. Parizvino, pane mitsara inodarika gumi yekugadzira muChina, zvese zviri zvigadzirwa zvekunze, zvine huwandu hwekugadzira huwandu hunosvika zviuru makumi maviri zvematani.
Nekuda kweimwe gaka pakati penyika yangu yekutakura tekinoroji uye nyika dzakasimukira pasi rese, kushandiswa kwematatu-maseru co-extrusion akateedzana ekupisa-anodzika ekuputira mafirimu muChina achiri padanho rekutanga, uye chiyero chekushandisa chichiri chakamanikana, inogumira pazvinwiwa, zvigadzirwa zvekuteerera-zvinoonekwa, zvekudya zviri nyore uye zvishoma zvigadzirwa zvemakemikari zvezuva nezuva Munzvimbo shoma, chinodikanwa chegore rinenge matani maviri kusvika zviuru makumi mashanu kusvika makumi matatu. Pvv kupisa kupisa shrinkable firimu zvakare inotora yakanyanya kupisa shrinkable kurongedza musika, ine hombe kukura kugona. Nekugadzwa kwenyika yangu kuWTO nekubatanidzwa kwayo nemusika wepasi rose, kuwedzera zvishoma nezvishoma kwekutakudza zvinodiwa kune huwandu hukuru hwekutengesa zvinhu kunze kwenyika, uye kukurumidza kukurumidza kwezvitoro zvemumba, kushandiswa kwematatu-matatu co-extruded kupisa shrinkable kavha firimu ichawedzera nekukurumidza. Zvinotarisirwa kuti-matatu-marara Iyo musika tarisiro ye-co-extrusion nhepfenyuro kupisa inodzikira firimu yakakura kwazvo.
Shrink Kuputira Firimu Rolls, Polyolefin Pof Shrink Kuputira, Shrink Firimu Pvc, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha, Polyolefin Pof Shrink Firimu, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira,